Baradhada | January 2020
Baradho Baradho Colorado waa noocyada cayayaanka ka soo qoyska ee lamid ah caleen, a subfamily of kuwa lamid ah caleen dhab ah. La baadhay 1824 kii Thomas Tomas, oo ah mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarsan ee dalagyada bidixda. Xilligan, ma aha oo kaliya maandooriyeyaasha kiimikada si ay ula dagaallamaan duqsiga, laakiin sidoo kale daaweynta dadweynaha ee baradho baradho Colorado ayaa helay sumcadda ballaaran.
Xaraashka Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata) waxaa iska leh qoyska curumi caleen, amar ah bahalka. Tani waa mid ka mid ah cayayaanka ugu caansan ee beerta beerta iyo khudradda, taasoo keenaysa dhaawac weyn. Ma taqaanaa? Wixii midabkiisa shanta midood ee madow ee mid kasta oo ka mid ah labada gacmeed, Colorado baradho qotoma waxay heshay magaceeda, taas oo macnaheedu yahay toban xariiq oo ku qoran Latin.
Kiwi baradho Kiwi waa mid ka mid ah rarest, taas oo ay kala soocaan qaabka aan caadi ahayn ee dalagyada xididka iyo qaabdhismeedka sirta. Kala duwanaantan badanaaba laga helo dukaamada iyo safafka dalalka CIS, sidaas darteed badi bannaanka u leh isaga oo aan la aqoon. Si kastaba ha ahaatee, Fiisooyinka fara badan ayaa jecel baradhada Kiwi si ay u xoojiso tiknoolojiyada beeraha iyo waxsoosaarka gaarka ah.
Kaluumaysigu waa nidaam isku dhafan oo miro-dhaf ah iyo habdhaqameedka biochemical si loo ilaaliyo tiro ballaaran. Silage waxaa lagu heli karaa halsano, taas oo ah, waa clamada aan lahayn oksijiin. Tani waa habka ugu caansan ee soo iibsiga. Isticmaal cagaar cagaaran oo dhir leh oo ku haboon abuurista quudinta xoolaha iyo digaaga.
"Prestige" ka soo barbaro baradho Colorado: sida loo baroosaska baradho ka hor beerto
Cayayaanka ugu weyn ee baradho ayaa weli ah baradho duqsiyo Colorado. Sannado badan, bannaanka ayaa isku dayaya in ay helaan aalad wax ku ool ah dagaalka ka dhanka ah. Dhammaan dadka maanta loo yaqaan, mid ka mid ah kuwa ugu fiican waa daroogada lafdhabarta ah. Waa maxay qalabkani iyo waxa uu yahay sifooyinka, waxaan sii sheegi doonnaa dheeraad ah. "Prestige": Faahfaahinta, halabuurka iyo foomka sii deynta Daroogadu waa ka-joojin xoog leh, taas oo lagu qasi karo qaybaha kala duwan, iyadoo ku xiran habka codsiga.
Beeraley kasta oo dhan waxaa la kulantay dhibaatadan oo kale sida cunista baradho by Colorado baradho baradho, iyo isku dayaya in uu helo xalkiisa ugu fiican ee la dagaallanka cayayaanka this. Waayo-aragnimadu waxay muujinaysaa in sunta ka soo baxdo baradarka Colorado baradho, la kariyey sida "guriga" cuntada, ma keenaan saamaynta la rabay, sidaas darteed, badanaa iyo badanaa, baradho jecel yahay isticmaala Taboo, kaas oo koontaroolaya lamid ah.
Baradhadu waa kuwa ugu caansan oo laga dalbado khudradda dalkeenna. Marar dhif ah qof kasta oo cunto ah kuma jiraan dhaqankan. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhaqankan, laakiin barafka "Rosara" ayaa ku guuleystay. Waxay isku dhafan tahay isku dhafka iyo nafaqada. Kala duwanaantani waa mid aan qabyo ahayn waxayna ku koraan xaalad kasta oo cimilada ah.
Tirada cayayaanka iyo cudurrada baradho waxay u dhigantaa riwaayadeeda. Beeraley kasta oo ka badan hal mar waa inuu ka fikiraa noocyada kala duwan ee waxyeellada dalagyada xididka ah iyo helitaanka khasaaro weyn ee goosashada iyaga sabab u ah. Sidaas yaa cuno baradhada, sida loo maareeyo cayayaanka waxyeellada leh iyo sii wadaan inay ka hortagaan weerarkooda - akhri wax dheeraad ah maqaalkan.
Beerta qaar ka mid ah, si looga hortago khasaarooyinka beeraha ee barafka, ayaa lagu beeray dalagyada xididada tiknoolajiyada cusub ee foostooyinka, bacaha iyo hoostaba. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxay ku qanacsan yihiin in aanay kaydin tubada bakteeriyada, fungi iyo fayrasyada ka soo horjeeda cuduro kala duwan. Waxay si ba'an u garaacaan dhirta caafimaadka leh iyo midhooda beerta furan, aqalka dhirta lagu koriyo iyo xitaa mashaakilka.
Dheecaan dabacsan (ama caleemaha bunka) waa cudurada ugu caansan ee dalagyada khudradda, oo ay ku jiraan baradhada. Wakiilka keena cudurka waa fungus. Maqaalkani waxaad baran doontaa sababaha ugu dambeeyay ee baradhada iyo tallaabooyinka xakameynta ee hadda jira ee loo isticmaalo cudurkan. Sababaha ugu xun ee baradho ah Sababta ugu weyn ee horumarinta abaarta dambe ee baradho waxay la xiriirtaa cudur la yiraahdo oomycete, kaas oo ka mid ah fangaska hoose.
Wax kasta oo baradho ah iyo meel kasta oo aad ku nooshahay, waa saxan soo dhaweyn leh miiska. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku nooshahay Siberia, xaaladdu waa mid aad u adag. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa nooca bataatiga, sida iyo goorta la beeri doono, ku nool aaggan. In kasta oo xaqiiqda ah in inta badan noocyada hore, horrantooda ay weli dhacdo bartamihii May - tani waa waqtiga aad u baahan tahay inaad ku beeri baradho ee Siberia.
Waa maxay macdanta "Irbitsky", maxay yihiin sifooyinka, sharaxaadda iyo astaamaha noocyada kala duwan, iyo sidoo kale sawirada iyo dib u eegista - kuwani waa macluumaad faa'iido leh oo faa'iido u leh beeralayda jecel inay rabaan inay koraan khudraddan si ay u gaaraan. Astaamaha iyo sharaxaadda noocyada kala duwan ee baradhada "Irbitsky" waa noocyo balanqaad ah oo loogu talogalay beerashada qudaarta.
Noocyo baradho nacas ah: hore, joogto ah, midho leh
Kala duwanaanshaha baradho waa mid sharaf leh oo loo yaqaan "Good Luck" sababtoo ah waxa uu shakhsiyan u yahay guusha dadaalada muddada dheer iyo dadaalka ah ee saynisyahannada Machadka Cilmi-baarista ee Beerta Beerta oo dhan loo yaqaan. A. G. Lorkha si ay u keento noocyada ugu haboon ee khudraddaas. Baradhada "Luck" waa noocyada fiisooyinka, kuwa xilliga xagaaga iyo dadka doofaarka ah ee doofaarka u doorta naftooda, waana ujeedada aan u jeedineyno maqaalkayaga kaas oo aad ka heli doonto sharaxaad faahfaahsan oo kala duwan oo sawirada, astaamaha iyo dib u eegista macaamiisha.
Maanta waxaa jira habab badan oo loo kordhiyo khudraddaas. Sida ugu dhakhsaha badan oo aan la korin: habka caadiga ah, iyo qoryaha, iyo godad. Laakiin waxaa jira hab kale oo aan caadi ahayn - baradhada sii kordhaya ee bacaha. Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada habka ugu sarraysa Faa'iidada ugu cadcad waa in la keydsado beerta.
Geedka dhirta oo idil wuxuu rabaa inuu helo badeecooyin kala duwan oo ah baradhada hore, taas oo heerkulka hidde-wanaaga laga ilaaliyo fayrasyada iyo cudurada microbial, iyo sidoo kale si fudud oo loo beeray dalalkeenna oo siinaya khudaarta cagaarka leh ee dhadhan fiican leh. Rajooyinkan waxaa loo keenay dhabta jarmaliyiin Jarmal ah, kuwaas oo, kadib dadaal dheer iyo tijaabooyin, waxay dunida u soo bandhigeen noocyo cusub oo baradho ah, Queen Anne.
Lama geli karo kuleyl xagaaga oo aan baradho lahayn. Waxaan u adeegsan karnaa khudraddan si aan u karino cuntooyin badan, waxaa inta badan laga helaa miiska. In maqaalka ah waxaan kuu sheegi doonaa waxa baradho ah Adretta waa, sharaxaad ka mid ah kala duwan, soo bandhigo sawiro iyo dib u eegis. Astaamaha iyo sharaxaada kala duwan ee "Adretta" waxay u muuqdeen qiyaastii 20 sano ka hor iyadoo ay sabab u tahay shaqada jarmalka Jarmal.